Toerana sôkôla misy lisitra siny hisokatra ao Zurich
Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Toerana sôkôla misy lisitra siny hisokatra ao Zurich
Ny tena anton'izany Lindt Tranon'ny sôkôla, tranombakoka 65,000 metatra toradroa feno fivarotana sôkôla Lindt lehibe indrindra manerantany, hanokatra ny varavarany amin'ny 13 septambra ao Kilchberg, Soisa. Ity fanampiana ity dia iray amin'ireo 'toerana' sôkôla malaza marobe any Zurich: miaraka amina marika nentim-paharazana sy efa niorina, miaraka amin'ireo sôkôlà vaovao, ny tanàna dia renivohitra sôkôla marina.
Ireo fampirantiana sôkôla multimedia dia handrakotra ny niandohan'ny voanjo kakao, ny tantaran'ny fizotran'ny famokarana ary ny lova ara-kolontsain'ireo sakafo. Ao amin'ny 'Chocolateria', ny mpandray anjara dia afaka mamorona sangan'asany manokana toy ny Lindt Master Chocolatiers amin'ny fiofanana. Ny pièce de résistance dia ilay loharano sôkôla — ilay loharano sôkôla lehibe indrindra eto an-tany — mijoro mihoatra ny 30 metatra ny halavany eo am-baravarana mahavariana.